Njalo umzali usuke efuna ukuba azungeze ingane yakho kusukela zisencane zonke amahle kakhulu. Omama kanye obaba zama ukukhetha amathoyizi kuphela ezikhangayo futhi ezimibalabala, cabanga ngokusebenzisa isitayela Igumbi yezingane nemininingwane emincane. Kodwa ngezinye izikhathi izingubo ngizinake. Muhle kancane - namanje namabala noma izinyembezi, abantu abaningi bacabanga. Eqinisweni, i-choice izingubo umntwana kubaluleke kakhulu. Yiziphi izinto okudingeka ukuba ikhabethe yezingane, futhi njengoba kungaqondakala ukuthi ingane wemfashini?
Into esemqoka - nokuhlanzeka!
Umsebenzi wawo wonke umzali - kusukela zisencane ukugxilisa ingane yabo amakhono ngoba inhlanzeko yomuntu siqu. Ungavumeli ingane yakho iya ezingcolile siyingcuba futhi singcolile, ngisho ekhaya, lapho "akekho ongibonayo." Yiqiniso, umphumela esiphezulu kulokhu bungatholakala kuphela esekele izinyane lembuzi ngesandla isibonelo sakhe siqu. Thenga izingubo nice ekhaya futhi ugeze khona njengoba kudingeka. Buka futhi kanjani ingane libukeka. Ingane nekhaya stylish akuyona ihembe nge izilongotshane noma ibhulukwe nge patch. Okumangazayo, uma ukukhumbuza ingane yakho mayelana ukuthi kubaluleke kangakanani ukubheka okuhle kuzo zonke izimo, uyozama kancane engcolile, futhi njalo ukuthola izingubo ezintsha akudingeki endlini.
Mayelana nokubukeka ngaphandle ekhaya kufanele ukukhuluma ngokwehlukana. Namuhla kukhona ngisho emaphaketheni izingubo for abancane. Fundisa ingane yakho ukuba njalo baphathe iduku futhi unganqikazi ukuxubha izinwele, uma kunesidingo, ukuwasha noku ukuba zigeze izandla emcimbini.
isitayela izifundo for abancane
izinsuku Kusilela kuthiwa kade laphela, futhi manje uma ufuna ungathola ku ukudayiswa zokugqoka zezingane yonke ukunambitheka kanye nesabelomali. Leli siko ukugcizelela malyshovom izingubo, futhi namakhophi amancane izinto omdala izitayela ezahlukene. Yini lokukhetha?
Kufanele uholwe kumuzwa wakho siqu, kodwa izazi zokusebenza kwengqondo yezingane ukweluleka ukugcina umthetho efakazelwe eminyakeni: acabangele wobulili umntwana ekulungiseleleni ikhabethe lakhe. Yebo, namuhla abantu abaningi namantombazane ukugqoka ibhulukwe kanye shirts nge mikhondo nemfashini, kodwa ikhabethe zonke fashionista abasha kumele kube izingubo nge ruffles, iziketi kanye blouses nge frills. Kodwa umfana, kunalokho, kungaba futhi kufanele igqoke njengendlela umnumzana abasha izingubo ukhululekile zakudala kanye jeans nge amahembe.
Futhi ungakhohlwa, sicela ukuthi umntwana, ezisesitayeleni noma kungenjalo, ziqale futhi ingane. Qiniseka ukuthi sicele indodana noma indodakazi mayelana nendlela / yena ekhululekile izingubo ezintsha, futhi sicabangele ukusikisela mayelana nomklamo.
imithetho elula ukuhambisana
Ngakho kanjani ogqoka izingane stylish - amantombazane nabafana? Okubaluleke kakhulu, izinto ngazinye zokugqoka, ekhethelwe ilihlo elilodwa, kuhlanganiswe nomunye. Ungakwazi sihlanganise izinto besenze nesitayela esifanako, noma uyengeze "kokungathathi hlangothi" - ethafeni, isitayela elula. Okulandelayo amandla futhi ethize ngokuhlanganisa imibala kanye indlela yokwenza futhi yakhe izicubu kwabantu. Izicathulo kanye nezigqoko futhi kufanele kukhethwe ngokuvumelana nalo mthetho.
Yenza 'smart' izingubo
Khumbula unomphela: izingubo ezisesitayeleni izingane akukhona ngempela ukuthi kuyabiza. Into eyinhloko ukwazi ukuthi ukukhetha izinto ezilungile. Ungafuni ukuthenga up izingubo ngangokunokwenzeka. Cabanga lezingubo eziyisisekelo - makube jeans noma iziketi, kuhlanganiswe nanoma iyiphi phezulu. Ungakhohlwa engeza uhlobo jikelele into, kanye ethafeni t-shirts kanye turtlenecks. Nale ikhabethe ngeke ngokuphelele ukufanisa yimuphi izingubo ezintsha.
ingane kwesitayela lapho abazali bakhe babe umqondo omuhle kakhulu isitayela futhi akulungele ukunikela ubuciko bheka ingane enhle amanabukeni. Zama ziyahlukahluka indodana noma indodakazi izingubo izesekeli egqamile futhi ezithakazelisayo, bese ngisho encane ukugqoka ingane yakho iyothembela umbukwane njalo.
Dweba icebo umsebenzi nezingane onamakhono
RC Helicopter Hambisa phezu Champs
Kanjani ukugubha uNyaka Omusha Vietnam
Pilaf Ideal e Panasonic multivarka